तातोपानी नाका खुलाउन राष्ट्रपतिको चासो - Nepal News - Latest News from Nepal
तातोपानी नाका खुलाउन राष्ट्रपतिको चासो
सिन्धुपाल्चोक: राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भूकम्पका कारण बन्द भएको तातोपानी नाका सुचारु नभएकोमा चासो देखाएका छन्। भूकम्पले अति प्रभावित जिल्लाको सदरमुकाम चौतारा निरीक्षणमा आएका डा. यादवले नेपाल चीन व्यापारको पहिलो नाका सुचारु हुन नसक्नुको कारणबारे स्थानीय प्रशासनसँग चासो व्यक्त गरेका हुन्।
शुक्रबार चौतारा आएका यादवले नाका सुचारु गराउने पहल भएनभएको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ज्ञवालीसँग जिज्ञासा राखेका थिए। उनले नाका सुचारु गराएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाका विषयमा समेत प्रश्न गरे।
‘ठूलो व्यापारिक कारोबार हुने नाका हो, नेपालीले उपभोग गर्ने धेरै सामान त्यही नाकाबाट आउँछ, त्यसलाई सुचारु गराउन कस्तो पहल भइरहेको छ?’ राष्ट्रपतिको जिज्ञासा थियो।
गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि अरनिको राजमार्ग ठाउँठाउँमा क्षति पुग्नुको साथै सीमा क्षेत्रका संरचनासमेत भत्किएपछि तातोपानी भन्सारबाट कारोबार रोकिएको छ।
भन्सार यार्डमा भएका कन्टेनर भ्यान राजधानी लगेर जाँच पास गरे पनि खासामा लोड भएका गाडी र गोदाममा भएका सामान नेपाल भित्रिन सकेका छैनन्।
मितेरी पुल र लार्चाको पुलमा समस्या देखाएर चिनियाँ पक्षले ठूला गाडी आवतजावतमा रोक लगाएकाले नाका सुचारु गर्न समस्या आएको सुरक्षा निकायले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको थियो।
भूकम्प पीडितले राहत नपाएको विषय सञ्चारमाध्यममा आएकोमा पनि यादवले स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले सुरक्षा निकाय र सामग्री नपुगेका ठाउँमा सञ्चारकर्मी पुगेको बताउँदै त्यस्ता ठाउँ पहिचान गरेर यथाशक्य छिटो आवश्यक सामग्री पुर्‍याउन निर्देशन दिए।
‘पीडितको खास आवश्यकता के हो त्यसलाई हेरेर पर्याप्त सामग्री पठाउनुपर्छ’, यादवले भने, ‘वर्षा सुरु हुनुअघि नै राहत वितरण केन्द्रमा असोजसम्म पुग्ने सामग्री पठाइसक्नुपर्छ।
उनले राजनीतिक दलहरूको भूमिकाका विषयमा समेत प्रश्न गरेका थिए। अस्थायी बासस्थानका लागि वितरण गर्न लागिएको रकमको प्रसंग उठाउँदै यादवले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा चुस्त र छिटो सर्वसाधारणकहाँ पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए।
यादवले पुनर्वास र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीका विषयमा चासो व्यक्त गरे। उनले टाठाबाठाले मात्र राहत पाएर पहुँच नहुनेले नपाएको अवस्था हुन सक्नेमा चनाखो रहन प्रशासनलाई सुझाए।
आवास तथा सहरी विकासमन्त्री डा. नारायाण खड्काले अस्थायी बासस्थान कति सुरक्षित छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रपतिको भ्रमणमा राजनीतिक दललाई नबोलाएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
करिब साढे नौ बजे आएका राष्ट्रपति यादवले चौतारास्थित गोरखनाथ गणमा जिल्लाको अवस्थाको जानकारी लिन झन्डै एक घन्टा बिताएका थिए। टोलीमा राष्ट्रपति यादव र मन्त्री खड्कासँगै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए।
मलेसियामा भूकम्पले ११ को ज्यान गयो
युवतीसँग लजमा बसेका युवकको रहस्यमय मृत्यु